लोकप्रिय ‘रामलखन’ : वडाध्यक्षका सशक्त उम्मेदवार – Satyapati
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९
लोकप्रिय ‘रामलखन’ : वडाध्यक्षका सशक्त उम्मेदवार
‘रामलखन’ वडाका नागरिकका लागि ‘जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी’ हुन् ।
जन्ती जाँदा ‘रामलखन’, मलामीमा ‘रामलखन’, मुद्दा मामिलामा ‘रामलखन’, विकासमा ‘रामलखन’, निकासमा ‘रामलखन’, गाउँबस्तीमा जस्तासुकै आपतविपत आइपर्दा ‘रामलखन’ । मधेसी, मुस्लिम र थारु बाहुल्यता रहेका गाउँका नागरिकको मुखैमा झुण्डिएको नाम हो, ‘रामलखन’ ।
ती समुदायका नागरिकहरुलाई ‘रामलखन’को नाम नलिए ‘खाना पच्दैन’ होला सायद । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा रहेका २४ वटा गाउँ टोलका नागरिकहरुको मुखैमा झुण्डिएको छ ‘रामलखन’को नाम । हुनत उनी सम्पन्न, उच्च ओहोदाको व्यक्ति नभई निम्न वर्गीय थारु समुदायको परिवारका व्यक्ति हुन् ‘रामलखन’ ।
२०७४ को निर्वाचनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका ‘रामलखन’ वडाका नागरिकका लागि ‘जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी’ हुन् । वडाका हरेक नागरिकका सुखदुखमा हातेमालो गर्ने ‘रामलखन’ वडामा मात्रै नभएर गाउँपालिकामै विकासप्रेमी वडाध्यक्षका रुपमा परिचित छन् ।
विकासप्रेमी भएकै कारण फेरि वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका ‘रामलखन’ बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आफूलाई अनुमोदन गराउनका लागि जनताका माझमा पुगिरहेका छन् । वडाध्यक्ष हुँदा वडाको समग्र विकासका साथै नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएर खटिरहने ‘रामलखन’लाई अहिले पनि मतदाताहरुको पूर्ण साथ रहेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण पहिलो र दोस्रो चरणका बेला नागरिकको सेवाका लागि निरन्तर खटिने वडाध्यक्ष हुन् ‘रामलखन’ । पहिलो चरणको कोभिडका बेला उनी भारतबाट आएका नागरिकको रेखदेखमा यति खटिए कि उनी आफैं संक्रमित भएर आइसोलेसनमा समेत बस्नुपरेको थियो ।
भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाको रातदिन रेखदेख गर्न खटिने क्रममा वडाध्यक्ष ‘रामलखन’ले क्वारेन्टिनलाई नै आफ्नो बासस्थान बनाएका थिए । भारतबाट आएकाको सिमानामा गएर उद्दार गरी क्वारेन्टाइनमा ल्याउने र क्वारेन्टिनमा रहेकाको सेवा गर्नमै दिन–रात बिताउँथे ‘रामलखन’ ।
वडाका कुनै सदस्य मध्यरातमा नाकामा आए भने पनि जानकारी पाउने बित्तिकै उनी उद्दारका लागि गाडी लिएर तत्काल पुग्थे । उनले कोरोनाभन्दा जनताको सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । उद्दार, राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि ‘रामलखन’ अहोरात्र खटिएका थिए ।
कोरोना कालमा मात्रै होइन, वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणमा तीब्रता दिनुका साथै ‘गाउँमै सिंह दरबार’ भएको महसुस गराउन उनको सक्रियता लोभलाग्दो थियो । ‘रामलखन’ भन्थे, ‘निर्वाचनपछि मेरो व्यक्तिगत जीवन भएजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनपछि मेरो जिन्दगी नै साझा भइसकेको छ ।’
पहिलो पटक वडाध्यक्ष भएका ‘रामलखन’ आफ्नो वडालाई नमूना वडा बनाउन आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरु तयार गर्न सफल भए । उनकै कार्यकालमा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माण भए । बाँके जिल्लामै नमूना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भयो । वडाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नमूना बनाउने कामको सुरुवात भयो ।
वडाभित्रका सबै टोल र बस्तीमा विद्युतीकरण भएको छ । २०७४ को निर्वाचनअघि वडाभित्रका विभिन्न गाउँमा जाँदा सास्ती खेप्नुपथ्र्यो । सडकको अवस्था दयनीय हँुदा हिँड्डुुल गर्नै मुश्किल पर्ने वडा नं. ७ का सडकहरु स्थानीय सरकार आएपछि सुधारिएको स्थानीयहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधि आउनुअघि वडाभित्र स्तरीय सडक थिएनन् ।’
स्थानीयहरु भन्छन्, ‘वडाका कुनै गाउँमा पक्की सडक नै थिएनन् । कच्ची र धुलाम्मे सडकले स्थानीयहरुलाई आवतजावतमा निकै सास्ती हुने सडकहरु पक्की बनेका छन् भने केही सडकमा ग्राभेल तथा माटो पटान गरी स्तरोन्नती गरिएको छ । ‘रामलखन’ वडाध्यक्ष भएर आएसँगै वडाको विकासले गति लिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
‘रामलखन’को पहिलो कार्यकालमै वडाको अवस्था निकै फेरिएको छ । सडकहरुको स्तरोन्नति गरिएपछि यहाँका गाउँहरुमा आउजाउ गर्न समस्या छैन । कच्ची सडकलाई स्तरोन्नती गरेर ग्राभेल गर्ने र ग्राभेल भइसकेका सडकहरु पिसिसी गरेर पक्की बनाइएको छ । केही सडकहरु कालोपत्रेसमेत गरिएका छन् ।
‘रामलखन’को सक्रियता र मेहेनत तथा प्रयासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा यस वडाभित्रका गाउँ बस्तीहरु सडक सञ्जालले घेरिएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा वडापालिकाले प्रत्येक टोलमा सडक सञ्जाल बिस्तार गरिसकेको वडाध्यक्षका उम्मेदवार ‘रामलखन’ले बताए ।
उनले भने, ‘आली बाटाहरु ग्राभेल सडकमा रुपान्तरण भएका छन् । ग्राभेल सडक पिसिसी गरिएका छन्, वडालाई राजमार्गसँग जोड्ने ग्राभेल सडक कालोपत्रे गरिएका छन् । यसले वडाका सर्वसाधारण हिँड्डुल गर्न लागि सहज बनाएको छ । पहिले पानी, हिलो भरिएर हिँड्नसमेत नसकिने सडकहरु अहिले उक्त समस्याबाट मुक्त भएका छन् ।’
‘रामलखन’कै पहिलो कार्यकालमा वडाभित्रका अप्ठ्यारा सडकहरु सजिला भएका छन् । वडाको विकासलाई सहज बनाउन सबैभन्दा मुख्य सडकहरुलाई स्तरोन्नती गरियो । वडाभित्रका सडकहरुको स्तरोन्नतीसँगै वडाका नागरिकलाई गाउँमै अन्य पेशा व्यवसाय गर्न सहज भएको पनि स्थानीयहरु बताउँछन् ।
बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो पटक वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका ‘रामलखन’ भन्छन्, ‘अब बाँकी रहेका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आफ्नो गाउँठाउँको विकासका लागि मेरो वडाका सम्पूर्ण मतदाताहरुले पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको सुखदुखमा साथ दिइरहने ‘रामलखन’लाई जिताउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।’
२०७९ बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा दोस्रो पटक वडाध्यक्षका उम्मेदवार बनेपछि ‘रामलखन’का घरदैलो अभियानका तस्वीरहरु :
२८ वर्षमा २६ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुल्यो
मेलमिलाप नीति अझै सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण
गैंडाको खाग तस्करी काण्डमा एसपीको ‘कनेक्सन’
गर्मी मौसम शुरु भएसँगै खानेपानीका मुहान सुक्दै
अनुगमनका नाममा केन्द्र सरकारको निर्देशन प्रदेश मन्त्रीबाटै उल्लंघन